के गर्दा खुसी हुन्छन् श्रीगणेश ? – Suchana Hub
काठमाण्डौ । आज मंगलबार, यानी श्री गणेशको दिन। आजको दिनमा गणेश भगवानलाई पुज्ने गरिन्छ । गणेशको आराधना नगरी कुनै कार्य गर्दा पनि सफल हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ । मंगलबारको दिन भगवान गणेशको दर्शन आराधना गर्नाले सबै कार्य शिद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता छ। करोडौं सुर्यको जस्तो तेज भएका भगवान गणेशलाई आराधना गर्नाले बिघ्न बाधा र अधुरा काम पूरा हुन्छन् भन्ने मानिन्छ।
मंगलबार बिहानै मोमबत्ती या दीप बाल्नुहोस् र बिहानको ध्यान गर्नुहोस् । साथै केही धार्मिक ग्रन्थहरु पढेर आफ्नो दिनको सुरुवात गर्नुहोस् ।बेलुका हात खुट्टा धुनुहोस्, कपडा फेर्नुहोस् अनि चोखो खाना (प्रसाद) बनाउनुहोस् । खाना (प्रसाद) प्रेम र सद्विचार अथवा कुनै मन्त्र उच्चारण गर्दै बनाउनुहोस् । यो मनन गर्नुहोस् कि, ब्रत या अन्य बेला खाना बनाउँदा पूर्णरुपमा त्यसमा ध्यान दिनुहोस् र प्रशन्न मन लिएर बनाउनुहोस् अनि मात्र खानाखाने मान्छेको आत्मा तृप्त हुन्छ ।
Previous यसपाली भाइटीकाको उत्तम साइत कहिले?
Next धन्तेरस २०७७ : यी राशीले यस्तो सामान किन्दा चम्किन्छ भाग्य
यसपाली भाइटीकाको उत्तम साइत कहिले?